Isla မာဂရီးတာ, ဒုက္ခအတွက်ကျက်သရေ | ခရီးသွားသတင်း
Isla Margarita, ဒုက္ခအတွက်ကျက်သရေ
Mariela Carril | | ကျွန်းများ, ဗင်နီဇွဲလား
El ကာရစ်ဘီယံ နေ၊ ပင်လယ်၊ အပူ၊ အိပ်မက်ကမ်းခြေများနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွား dest ည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်းများစွာလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာလူကြိုက်အများဆုံးကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Margarita ကျွန်း.
ဒီကျွန်း ဗင်နီဇွဲလားကပိုင်ဆိုင်သည် နှင့်ခေါင်းစဉ်ကိုတိုင်းပြည်ဖျက်ဆီး, ကာရစ်ဘီယံ၏ပုလဲအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုရပ်တန့်မထားဘူးသောနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်ဘာမျှမပျောက်ဆုံးပြီးကျွန်းသည်ယခင်ကဲ့သို့လှပနေဆဲဖြစ်သည်။ ရှာကြစို့။
1 Margarita ကျွန်း
2 Isla Margarita တွင်လုပ်သင့်သောအရာ
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်၏အရှေ့တောင်ဘက် နှင့်အခြားကျွန်းနှစ်ကျွန်းနှင့်အတူဗင်နီဇွဲလားရှိတစ်ခုတည်းသော Insular ပိုင်နက် Nueva Esparta ဖြစ်ကြသည်။ ကိုလံဘတ်စ်သည်မေလ၏ယူဆချက်နေ့ဖြစ်သောသြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်းသည်ကိုလံဘတ်စ်က La Asunciónအဖြစ်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ နောက်တစ်နှစ်တွင်မာဂရီးတာမာအမည်ရခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်?
နာမတော်ကိုအမှီပြု။ ဂရိကနေဆင်းသက်လာကြောင်းဖြစ်ပါတယ် မာဂရီးစ် ဆိုလိုသည်မှာပုလဲနှင့်ပုလဲအမြောက်အများကိုထိုအချိန်တွင်ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောကြတယ် ဒါပေမယ့်သူကဘယ်လိုသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တာလဲ ပါရာဂွေး, ငါးသို့မဟုတ်သင်္ဘောသားများစွာသော။ သိရတာကောင်းတယ်
Isla Margarita သည်ဗင်နီဇွဲလားကျွန်းတွင်ကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုတွင်အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်၏ 1070 စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပါတယ် ပင်လယ်ရေနှင့်ကွဲလွဲနေသောရေငန်ရေအိုင်နှင့်ကမ်းခြေရှိအဖြူရောင်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုကဆက်နွယ်နေသောတောင်တန်းနှစ်ခုဖြင့်ဖြတ်ကျော်သည်။ Massif တစ်ခုကို Paraguachoa နှင့်အခြား Macanao Peninsula ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်း၏အမြင့်ဆုံးတောင်သည်ဤနေရာတွင်ရှိပြီးမီတာ ၇၆၀ ရှိသည်။
ရာသီဥတုမှာအပူပိုင်းခြောက်သွေ့သည် အများကြီးနှင့်အတူနေရောင်တွေအများကြီး (protector ကိုမမေ့ပါနဲ့) နှင့်တစ် ဦး ပျမ်းမျှအပူချိန်27ºC။ နိမ့်ဆုံးနိမ့်ကျမှုသည် ၂၂ below စင်တီဂရိတ်အောက်သို့မကျသောကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူကိုအာမခံပါသည်။ နို ၀ င်ဘာမှဖေဖော်ဝါရီအထိမိုးရာသီရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်နည်းပါးသည်။
ဥရောပနှင့်အခြားအမေရိကမှနိုင်ငံခြားသားများသည် Isla Margarita တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်း၏မြို့တော်မှာ La Asunciónဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်အကြီးမားဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ် ပန်းချီဆရာလူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်နီးပါးသည်ကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ကြပြီးရာသီအလိုက်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ကျွန်းသည်မည်သည့်နေရာ၌နေထိုင်သနည်း။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ gastronomy (သို့) ဖျော်ဖြေရေးလောကကဲ့သို့စီးပွားရေး၏အခြားကဏ္areasများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောခရီးသွားလုပ်ငန်း။ ဒါ့အပြင် အခမဲ့ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု
Isla Margarita တွင်လုပ်သင့်သောအရာ
ဒီမှာနေ၊ ပင်လယ်၊ ကမ်းခြေသဘာဝကိုခံစားခြင်းအကြောင်းပါ။ ဒါဟာအများကြီးရှည်လျားသောကမ်းခြေရှိပါတယ်တစ်ခါတစ်ရံမီတာ ၃၀၀ မှ ၉၀၀ ရှည်လျားသည်၊ အားလုံးအများပြည်သူအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများဖြစ်သောဇုန် ၄ ခုတွင်တည်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကမ်းခြေတွေကဘာတွေလဲ။
အထူးကုများ Puerto Viejo, Bella Vista၊ El Agua, La Restinga, Moreno, El Yaque, Parguito, Caribe, Manzanillo, Punta Arenas နှင့် Salinas။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီအဖြူရောင်သဲသဲသောင်ပြင်များနှင့်ကြည်လင်သောရေ။ ထို့အပြင်ရှိပါသည် ကိုချီကျွန်း Punta Blanca နှင့် Amor ၏ကမ်းခြေများရှိရာ။
Punta Arena ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာ၏အကြိုက်ဆုံးကမ်းခြေဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Macanao ရဲ့အဆုံးမှာတည်ရှိပါတယ်, Porlamar မြို့နှင့်တစ်နာရီအကောင်းဆုံးကတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဏ္ဏဝါပြတိုက်သို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့်အတူခရီးစဉ်ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ကမ်းခြေ၏အစွန်အဖျားသည်အနောက်တောင်ဘက်အစွန်အလန်ဖြစ်ပြီးမာရာဂရတီနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သဲများရှိသည်။ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်ငါးဖမ်းရွာငယ်တစ်ခုရှိပြီးခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက်နေရာများရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော်လည်းစားရန် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
ဒီမှာစံပြအရာကနေဝင်ချိန်အထိနေဖို့ဖြစ်တယ်။ ပင်လယ်ထဲကျရောက်ပြီးနိုးထနေတဲ့အရောင်တွေကလှပနေလို့ပဲ။ The အယ်လ်အာဂွာကမ်းခြေ ၎င်းသည် ၄ ​​ကီလိုမီတာရှည်။ ၃၀ ကျယ်သောရွှေသဲနှင့်စွန်ပလွံပင်များနှင့်ကျော်ကြားသည်။ ၃ ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးလှပသော Boulevard တစ်ခုရှိပြီးပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရှုရန်စားသောက်ဆိုင်များစွာရှိသည်။ The အယ်လ် Yaque သဲသောင်ပြင်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ကျွန်း၏တောင်ဘက်တွင်လေဆိပ်မှ ၃ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိပြီးပင်လယ်ရေတိမ်ပိုင်းနှင့်လေကိုတိုက်ခတ်သောကြောင့် windsurfing အတွက်အကောင်းဆုံး
ဒီမှာလှည့်လည်စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဟိုတယ်တွေနဲ့တည်းခိုခန်းတွေအပြင် surfing and windsurfing ကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ရှည်လျားသောကမ်းခြေသည် Parguito, အရှည်မီတာတထောင်နှင့်အကျယ် 20သို့မဟုတ်ကျွန်း၏အရှေ့မြောက်ဘက်သို့။ သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အတွက်၎င်းသည်လှိုင်းများနှင့်လေကိုလိုအပ်သည့်အားကစားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ El Agua ကဲ့သို့လူကြိုက်များခြင်းမရှိသော်လည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးနေထိုင်သောကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကား Isla Margarita အပေါ်ကမ်းခြေအချို့, ဒါပေမယ့်သိသာတဲ့တစ်ခုတည်းသောမ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေအောက်မှာရှိတဲ့ဘဝကမင်းရဲ့အားလပ်ရက်ကိုသာဖြည့်စွက်ပြီးသင်ကြိုက်လျှင် အခြားအရာများလုပ်ပါ ထို့နောက်စာရင်းတစ်ခုကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် La Restinga အရာကျွန်း၏နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်သွယ်နှင့်တစ် ဦး သောတံတားဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားပန်းခြံ။ Punta Piedras ကူးတို့ဆိပ်ကမ်းမှ ၁၀ မိနစ်သာ၊ Porlamar မြို့မှနာရီဝက်ခန့်နှင့်လေဆိပ်မှ ၁၅ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
ပန်းခြံဝင်ပေါက်ကိုပေးပြီးသည်နှင့် mang ည့်သည်များဒီရေတောများနှင့်တူးမြောင်းများမှတဆင့် take ည့်သည်များသွားလာကြပြီး၊ ၂၂ ကီလိုမီတာရှည်သောကမ်းခြေ, ကြမ်းသဲနှင့်လှိုင်းတံပိုး။ သငျသညျလိုလျှင်သင်သည်နေ့အဘို့နေဖို့။
ပေါ်လာမြို့သည်ကျွန်းပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် အထူးသဖြင့်သင်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသည် စျေးဝယ်။ သူ့အကြောင်း Boulevard Guevara စန်တီယာဂိုMariñoနှင့်4de Mayo လမ်းများပေါ်တွင်စျေးဆိုင်များစွာနှင့်အတူတူပင်ရှိပါသည်။ မြို့၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, ဆီသို့ ဦး တည် ပမ်ပါတာတိုးတက်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သော Sambil စျေးဝယ်စင်တာဖြစ်သော La Redoma နှင့် Rattan Plaza ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။
အခမဲ့ဆိပ်ကမ်းကဘယ်လိုလဲ စျေးနှုန်းများအခွန်မပါဘဲ, unbeatable ဖြစ်ကြသည်။ ယခင်ကရိုးရှင်းသောစျေးကွက်ဖြစ်သော်လည်း Conejeros ၏မြူနီစီပယ်စျေးကွက်တွင်စျေးနှုန်းများလည်းကောင်းမွန်သော်လည်းယနေ့လူကြိုက်များသောနေရာသည်စျေးနှုန်းများကိုနိမ့်ကျအောင်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
La Asunciónသည်ကျွန်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးခရီးသွား y ည့်သည်လည်းဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Santa Rosa de la Eminencia ရဲတိုက်၁၇ ရာစုမှပြင်သစ်တို့၏လုယက်မှုအပြီးတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိတနင်္လာနေ့မှတနင်္ဂနွေအထိ visitors ည့်သည်များအားဖွင့်သည်။ အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာများရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် ပလာဇာ Bolivarဥပမာ - ၁၆ ရာစုမှယူဆောင်လာသောမေမေ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။
အပေါ် Juan Griego ဂလားပင်လယ်အော်, တူညီတဲ့အမည်ဖြင့်မြို့တော်၌, ဖြစ်ပါတယ် Fort La Galeraနောက်တစ်ခုကနေဝင်ချိန်ကိုစဉ်းစားဖို့အကောင်းဆုံး Punta Ballena မီးပြတိုက်, ဝေးနှင့်မဝင်ရ။ အသင်းတော်များကိုထည့်ပါ Cerro အယ်လ် Copey အမျိုးသားဥယျာဉ်လှပသောလေ့လာရေးကုန်းပတ်များနှင့်လမ်းကြောင်းများစွာနှင့်အတူ အဏ္ဏဝါပြတိုက် နှင့်ကျွန်းကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးနှင့်သင်သည်၎င်းကိုကာရစ်ဘီယံနေရာများစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
သို့သော်ယနေ့ Isla Margarita တွင်ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ကောင်းပြီ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကသူမကိုဖြိုခွဲလိုက်သည် နှင့်အားလပ်ရက်ခရီးတွင်ဗင်နီဇွဲလားရောက်ရှိမှုများစွာလျော့နည်းသွားသည်၊ လေကြောင်းလှိုင်းများလည်းလျော့နည်းသွားသည်။ တိုတောင်းသောကြောင့်နောက်ဆုံးရာသီအနည်းငယ်မှာမျက်ရည်ကျခဲ့ရသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံသည်လေတိုက်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်တိုးတက်မှုများမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » ဗင်နီဇွဲလား » Isla Margarita, ဒုက္ခအတွက်ကျက်သရေ
အဘယ်အရာကို Alentejo ဒေသတွင်း၌ကြည့်ရှုပါ